နိုင်ငံခြား ရောက်ရင် မြန်မာဆိုတာကို လက်မထောင်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်ပါတော့မယ်. – Askstyle
နိုင်ငံခြား ရောက်ရင် မြန်မာဆိုတာကို လက်မထောင်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်ပါတော့မယ်.
နိုင်ငံခြား ရောက်ရင် မြန်မာဆိုတာကို လက်မထောင်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောနိုင်ပါတော့မယ်..
လက်ရှိ တကမ္ဘာလုံးမှာ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၇၈၀၀ ရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသူပေါင်းက ၆၈ သန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၅ နိုင်ငံရှိပါတယ်။ ဆေးစထိုးနိုင်တာ ၅၆ နိုင်ငံပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တကယ့်ကို လူအနည်းစုလေးပဲ ထိုးနိုင်သေးတဲ့ဆေးကို ထိုင်း၊ မလေးရှားတို့လို နိုင်ငံတွေထက် စောပြီး ကျနော်တို့ ထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ လူနည်းစုလေးထဲ ကျနော်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါပြီ။
မကြာခင် ပြည်သူတွေကိုပါ ထိုးပေးနိုင်တော့မှာပါ။ အမေစုက အလှူငွေတွေကော နိုင်ငံတော်ကပါ ငွေတွေပါပေါင်းပြီး ဘယ်လောက်ကုန်ကုန် နိုင်ငံတော်က စိုက်ပြီးထိုးပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေစု ကျေးဇူးတွေက ကြီးမားလှပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နေ့ထိုးပေးနိုင်မယ်လို့ တိတိကျကျ အာမခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံ အတော်နည်းပါတယ်။ သန်းပေါင်းများစွာသော လူသားတွေဟာ ဘယ်နေ့မှ ဆေးထိုးရမယ် မသိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ကတော့ ပြည်သူတွေကို ဘယ်နေ့ ဆေးစထိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ ကြေညာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
အမြဲတမ်း သူများနောက်မှာပဲ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက အားကျတဲ့မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရှူခံရတဲ့၊ ချီးကျူးခံရတဲ့အနေအထားကို ရောက်လာပါပြီ။ ဂုဏ်ယူစရာ အချိန်အခါတခုပါပဲ။ (နေသွေး)
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာကို ဒီကနေ့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ ဘောလုံးကွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ် ကုသရေး ဧရာဝတီ စင်တာမှာ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီစင်တာက ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဗော်လန်တီယာ လူငယ်တွေကို စတင်ထိုးနှံ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ စင်တာမှာ ကျန်းမာရေး ဝန်းထမ်းတွေနဲ့ လုပ်အားပေး စေတနာရှင်လူငယ် စုစုပေါင်း အယောက် ၆၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
ဧရာဝတီစင်တာမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာကို လူဦးရေ နှစ်ရာ တပြိုင်နှက်ထဲ ထိုးနှံလို့ ရအောင်ပြုလုပ်ထားပြီး ကျန်တဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ နေရာ အခက်အခဲရှိရင် ဧရာဝတီစင်တာက နေရာကို အသုံးပြုလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ ဧရာဝတီစင်တာ တည်ထောင်သူ ဦးဇော်ဇော်က ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ပထမ ဦးစားပေးအုပ်စုတွေအဖြစ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာ လုပ်အားပေးနေတဲ့ ဗော်လန်တီယာ လူငယ်တွေဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ဦးစားပေးအဖြစ် အသက် ၆၀ အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။